Gini mere French ji ekpuchi ihu ha mgbe ị na-asụ Bekee ma gịnị jikọrọ nke a na ndị Brazil? - 1aviagem.com
Gara aga post: Niagara Falls vs Foz do Iguaçu kedu kacha asọ asọ mmiri?
Nkwupụta ọzọ: A ga-amachibido ọgwụ caffeine na cocaine?
Edebere 12 May 2019 site Römulo Lucena
Taa, anyị ga-ekwu banyere asụsụ na ihe mere French ji na-enwu egwu mgbe anyị na-asụ Bekee.
Ọfọn, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile m kwurula banyere France, ndị nọkwa n'ebe ahụ, kwuru ihe abụọ mgbe niile:
Na e nwere ebe mara mma, magburu onwe ya.
Na French na-ekpuchi ihu ha ma ọ bụrụ na ị na-asụ Bekee.
N'ihi ya, ekpebiri m ịlele akụkọ a n'ụzọ ziri ezi.
Okwu mbụ ahụ bụ eziokwu. N'ezie, France bụ ebe magburu onwe ya na Paris na-anọchi anya ya.
Okirikiri nile, n'okporo ámá nile, ebe obula ozo bu ihe ncheta, isi iyi, oghere, ogige, ulo eze. Ọ dị ezigbo mma!
Ọbụna Winston Churchill gwara gị ka ị gaa ụkwụ.
Site n'ụzọ ọ bụla onye ọ bụla na-ekwu maka njem "na-aga", echiche banyere Paris na-abịa.
Ugbu a, ka anyị gaa nkwupụta nke abụọ, gbasara French na-agbachi imi ha ma ọ bụrụ na ị na-asụ Bekee.
Na nke a, m nwere ike ịsị na ọ bụ eziokwu. Ma, nke a enweghị ihe jikọrọ ya na ile ọbịa. Ọ bụrụ na onye ọ bụla echee na French enweghị enyi, ọ dị njọ. Onye ọ bụla nke na-ekwu okwu ahụ na-eche banyere ile ọbịa anabataghị mmụọ nke ihe ahụ.
Dabere na njem mbụ m na France, ana m ekwu eziokwu na achọtara m French ezigbo enyi, onye na-arụsi ọrụ ike ma na-ele ọbịa. Na imegharị ihu gị ma ọ bụrụ na ị na-asụ Bekee bụ n'ezie ihe mgbochi asụsụ.
Ọ bụ ihu ihu nke "hã?! Gịnị? Olee otú?
Eziokwu bụ na Bekee bụ asụsụ dị iche na French. Na France ha na-asụ French. N'ezie!
Ee, e nwere ebe ị ga-asụ Bekee ee, karịsịa na ebe ndị njem nleta. Ma asụsụ Bekee abụghị asụsụ nke abụọ ha. (nwaa Castilian).
Dị ka EF PI (French Faficiency index in EF) France nọ na nsonye 35 n'etiti mba 88. Nke pụtara na ha nwere nkà dị elu n'asụsụ Bekee. (Isi: https://www.ef.com.br/epi/ nweta: 11 May 2019)
Ugbu a kwụsị ma chee, otu ihe ahụ ga-eme ma ọ bụrụ na onye France bịara Brazil ma malite ịsụ Bekee. Kedu ihe ị chere ga-eme? Ihe ka ọtụtụ ná ndị Brazil agaghị aghọta ihe o kwuru ma 'ga-agbaji imi ha' ma dị ka: Huh ?! Ònye?! Olee otú? Kedu ihe ọ na-arịọ?
Site n'ụzọ, na-eji otu EF PI ederede nhazi, Brazil nọ na 53 ọnọdụ nke 88 mba. (35 ka 53 bụ naanị invert hehe).
Nke a bụ ihe mere n'oge 2014 ụwa iko na 2016 Olympics. ihe a hụrụ bụ iju mmiri nke ndị njem nlegharị anya n'ihi na ha enweghị ike ikwu okwu n'asụsụ Bekee na mgbe ụfọdụ na Spanish (ma ọ bụ Castilian).
Ee, n'adịghị ka ọtụtụ ndị na-eche, na Brazil, otu anaghị asụ Spanish, otu na-asụ Portuguese. Castilian dị mfe maka ndị Brazil ịghọta, ebe ọ bụ na asụsụ Portuguese na Spanish sụgharịrị Latin. Ma ha bụ asụsụ dị iche iche.
French nwekwara mgbọrọgwụ Latịn na mgbọrọgwụ German. Ya mere, ọ dị mfe ikwu okwu n'asụsụ Portuguese ma ọ bụ Spanish na French karịa n'asụsụ Bekee. Nke ikpeazụ bụ asụsụ Anglo-Saxon. N'ọdịnihu Bekee ga-enwe mmetụta nke German na French, ma anyị ga-arapara na mmalite.
N'ezie, anyị na ndị French, nke a dị njikere imeghachi omume, ọmịiko a. Anyị na-achọ ịgafe ihe mgbochi asụsụ. Ana m ahapụ ebe a ekele m maka onye ọ bụla na-ere ụlọ, ụlọ ahịa, nri ehihie, nke tiketi ụgbọ ala. Ndị ọrụ afọ ofufo French na Brazil. M ga-enyere ụfọdụ ndị njem nleta 5 ma ọ bụ 6 nọ na Brasilia n'oge iko ụwa. E nyekwara m aka nke ukwuu n'ebe ahụ.
Ọfọn, ugbua na ụbọchị mbụ anyị na Paris anyị nwere ahụmahụ ahụ. Anyị amaghị otú e si asụ French. Anyị rutere obere oge mgbe anyị risịrị nri ehihie. Nke ahụ bụ, agụụ na-agụ anyị, anyị ka na-eji akpa akwa achọ ụlọ ahụ.
Anyị kwụsịrị n'ebe nri nri maka nri ehihie. Mgbe m rutere n'ebe ahụ, agara m ịjụ maka ihe dị n'asụsụ Bekee. Onye na-ejere m ozi lere m anya, mee ka ihu m? Kedu? Olee otú? O we chere ka m chere. Ọ kpọrọ onye ọzọ ghọtara Bekee. Ha kọwaara m otú o si arụ ọrụ. Na ihe nri ahụ mere.
N'oge na-adịghị anya, mgbe anyị nọdụrụ ala iri nri onye ahụ na-eje ozi hụrụ na anyị na-asụ Portuguese, ọ gwara anyị okwu n'asụsụ Portuguese ma kwuo, sị: Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọ bụla ị nwere ike ikwu, ma ọ bụrụ na ịchọrọ na Portuguese, m Portuguese!
Anyị na-agafe n'ọtụtụ ebe, a na-ejikwa anyị "Bonjour" (ụtụtụ), "Bonsoir" (ezigbo mgbede) "Bon appetit" (ezigbo agụụ). Mgbe ụfọdụ site n'igosipụta ihe na ịkọwa ihe anyị chọrọ ka anyị jisiri ike ịjụ maka ihe. Oge ndị ọzọ anyị na-eji English kwa. Na ebe ọ bụla anyị gara, ndị French anyị na-akpakọrịta na-enwe ezigbo enyi.
Ya mere, na-aza okwu abụọ ahụ na mmalite nke ederede.
Ee, e nwere ebe magburu onwe ya magburu onwe ya.
Na ee. Ndị French ndị enyi gị ga-agbachi ihu ha ma ọ bụrụ na ị bịarute na-asụ Bekee, dị ka a na-eme na mba ndị ọzọ, gụnyere Brazil.
A hug na oge ọzọ m ga-ekwu banyere Paris na ndụmọdụ na ebe.
Nwee anya (Goodbye).
Hụ ọkwa ndị ọzọ anyị site na ịpị na eserese dị n'okpuru: